Lo muzi American isikhathi eside sasingeyona ethandwa njengoba kuba yimpumelelo e-San Francisco umakhelwane. Eminyakeni eyishumi edlule, ke iye yaba isikhungo esiyinhloko commercial nezamasiko California futhi igcinwe kancane kancane phambili. Omunye wemizi emikhulu emithathu isimo, wafika ephambili ubuchwepheshe ezintsha.
Modern San Jose (California) - idolobha endala isimo futhi wesitsatfu mayelana labantu. Inhlokodolobha olungekho emthethweni we-US -Silicon Valley, lapho amahhovisi izinkampani eziningi owaziwa emhlabeni, benamandla umoya ubuchwepheshe besimanje nensada ingilazi futhi amakhaya ukhonkolo njenge-ukubukwa idolobha kumnandi kusukela esikhathini eside esizako.
Ngokusho izibalo ezisemthethweni, idolobha yasungulwa ngo 1777. Wayengumuntu isikhungo esiyinhloko wekoloni waseSpain okusha California, kodwa akukho izikhumbuzo zomlando kwaleyo nkathi eziye zalondolozwa. Kwaba isiphetho ukulima ezincane, okuyinto ngawo-1850, ngemva kokuthola uzibuse isimo kwaba nenhloko-dolobha yalo. ezweni ongakasetshenzwa waqala ukuze bakheke ngokushesha, kanye nokukhula electronics umkhakha siguqulwe umphakathi yezolimo zobuchwepheshe obuphambili global isikhungo.
Isimo sezulu e San Jose (California)
Izivakashi uthande lo muzi ehlukile sezulu layo emangalisayo leli zwekazi. Effect Pacific ukugeleza abathwele thunzi kuthiwa buthaka, ngokungafani kwamanye amadolobha asogwini. Izintaba ezisizungezile ke nhlangothi zonke, uvikeleke emvuleni nomoya onamandla, kodwa ngoba izinsuku ezingaphezu kwezingu-300 ngonyaka lapha owandile sezulu libalele nge isibhakabhaka. Inzika ivelakancane, ehlobo epholile futhi efudumele ebusika injabulo abahambi abavela emazweni ehlukene abeza lapha eholidini unyaka wonke.
Ukuthuthukiswa komnotho we sezentengiselwano
I umnotho wedolobha, lapho kukhona izinkampani zobunjiniyela nekhompyutha kanzulu, okhula ngokushesha. Liphinde elikhula ngokushesha kanye labantu, kodwa asikwazi ukuthi zonke izinkinga abakhona bayavikeleka isikhungo kwezomnotho. Umuzi zibiza kakhulu izindlu, futhi cishe izikhathi eziphindwe kasithupha amaphesenti abantu baphile ngaphasi kwelizinga lebuphuya. Ukuqala xxi leminyaka kwaphawulwa uhlanga okutholakele zobuchwepheshe, inkampani ngayinye wazama ukuthola phambili ukuwina umthengi. Ngalesi sikhathi e San Jose (CA), amakhulu izinkampani Inthanethi waya yimali nezinkulungwane umsebenzi abantu lishis. izakhamizi Isikhungo sebhizinisi ngasilibala ukuthi impumelelo, kukhona embi ngalo.
Lonke muzi kubhekwa abacebe edolobheni e-America, kanye nenkokhelo sabantu kubhekwe aphakeme kuleli zwe. ukuphila Sawubona emzaneni - indawo ezidumile umsebenzi program abanolwazi nososayensi, ngakho lapha ukusheshe Ochwepheshe best emkhakheni wezakhi ikhompyutha, iphupho yaqaphela mkhakha. Kuze kube manje, umuzi eqoshiwe izinkampani kuka 6.500, zazo abantu abayizinkulungwane 250 baqashwe.
Ukutshala imali idolobha bezinhlangano ezimbili ezinamandla
Huge corporation Apple kakade usenikeze kwezigidi ezingu-300 zamaRandi ngokwamanani ekuthuthukiseni San Jose. California futhi City Council ivume isifiso wenkampani American ukwakha ihhovisi esifundeni. It is kuhlelwe ukuthi futovofisnyh square izindawo kwezigidi ezinhlanu iyoba yindlunkulu giant ubuchwepheshe.
Futhi ngo-2013, esincintisana eyinhloko sha American, umkhiqizo eNingizimu Korea yilona Samsung, sibekwa isisekelo ucwaningo nentuthuko yayo isikhungo. Futhi ngemva kweminyaka emibili yakhoselisa 10 storey ihhovisi indawo abangaphezu kwesigidi square metres. ft. Osendaweni luhlobo okubalulekile nenkampani enkulu kunazo zonke utshalomali e San Jose (CA). Ngakho Samsung uhlela ukwandisa khona layo emakethe US.
indlu Strange - Maze
Idolobhana nemithetho yayo siqu zokuphila Sinesithakazelo esikhulu kwezivakashi. ezikhangayo zako ezisemqoka ezisetshenzisiwe eminyuziyamu eziningi endlini haunted.
Villa Winchester neyaziwayo isakhiwo eyinqaba e San Jose, imele wedwa. Kuphakanyisiwe indodakazi izingalo nomkhiqizi ezintathu storey indlu enkulu kuba Maze Tangled, lapho iminyango zivulwa ukuze izindonga nalutho, imihubhe Meander emazombezombe izindlela kanye izitebhisi iphele ophahleni. Umnikazi wendawo esasihlala kuyo uzama axoshe imimoya emibi evela endlini, okuyinto, ngokombono yayo, elabulala abathandekayo.
isivakashi ongatjhejisisiko kokubanga breaking entanyeni yakhe, futhi ngemva kokuhlephula ewindini linamathele phansi, noma baphume ngomnyango esivula kwangaphandle. Maze ethusayo amakamelo 150 nge deadlocks, amavesi imfihlo waqaphela njengoba omunye izindlu oluyimfihlakalo kunalo lonke emhlabeni. Izakhamuzi San Jose (CA) zikholelwa ukuthi imimoya uhlale khona namanje begijima beyofuna okukhipha phantom.
Yini enye ukubona edolobheni?
Isayensi Nobuchwepheshe Museum itholakala inhliziyo muzi. embukisweni yakhe ngeke sixoxe ngendlela yesimanje nobuchwepheshe kuthinta izimpilo zabantu.
Art Museum, ihlangana ngokuvumelanayo ku landscape komuzi esizayo, owayekade igalari ezincane, okuyinto ubukisa imisebenzi abadwebi imfashini, futhi manje isisezweni isikhungo ngobukhulu for yobuciko wesimanje.
Library ML King, eyabonakala engu-13 edlule, inikeza izivakashi ukufinyelela kwamahhala multimedia imithombo eziphambili. Kwathengwa isakhiwo esiyisitezi ezimhlophe iyingqayizivele kweqiniso yezakhiwo.
Indawo egcina amagugu esizwe waseGibhithe Rosicrucian - wangempela amagugu afihlekile, equkethe zobuciko esiyingqayizivele yaseGibithe lasendulo.
Museum of zezindwangu textile Kuyathakazelisa ngoba yilona kuphela isikhungo salolu hlobo Melika. Njalo ezinyangeni ezintathu, ukuqoqwa agcwaliswa zezinhlobo ukwazi.
Njengakho konke izivakashi ngokuvakashela lesi isimo, efana California, edolobheni laseSan Jose ophila esizayo, futhi kukhona imibono yezakhamuzi zendawo isilungisiwe. Ngisho naphakathi kwabangane zonke izingxoxo amayelana ubuchwepheshe okusezingeni eliphezulu. Futhi ngenkathi belapho, lo muzi omkhulukazi isikhathi eside, ngeke anesikhundla okuholela emkhakheni ubuchwepheshe ezintsha.
Idolobhana Albufeira (Portugal): incazelo, amaholide, isithombe
Kusho "Ferum Lek". Yokusetshenziswa